Izindaba - Qingdao Silinde Industrial Equipment Co., Ltd.
Qingdao Silinde Industrial Izinsiza kusebenza Co., Ltd.
I-Qingdao Silinde Industrial Equipment Co., Ltd.inikezelwe ucwaningo, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwephrojekthi ye-YSC brand automation project kule minyaka edlule. Ngomzabalazo oqhubekayo wenkampani yethu iminyaka, imikhiqizo ye-YSC ithengiswe kuwo wonke umhlaba. Ngekhwalithi yayo evelele, izinsizakalo eziqediwe kanye nentengo yokuncintisana kakhulu, isibe ngomunye wemikhiqizo ethembeke kakhulu embonini yokulawulwa kwezimboni eChina. Ngokusebenzisana nobuchwepheshe besikhathi eside nezinkampani zaseYurophu, zaseJapan nezaseNingizimu Korea, bekunothisa uhlelo lwayo lomkhiqizo futhi kunwetshwe ku-valve yokuzithiba kanye nemishini ekhethekile evela kwimikhiqizo ye-pneumatic hydraulic. Inkampani yethu isungule isethi yohlelo lokuphatha ikhwalithi ehlakaniphile ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo we-YSC brand ifinyelela ezingeni eliphakeme phakathi kontanga bayo emhlabeni jikelele.
Kusukela yasungulwa, i-YSC, njengomkhiqizo odumile embonini ye-pneumatic hydraulic, ibibambe iqhaza elibonakalayo enqubeni yezimboni eChina. Bekulokhu kuhambisana nomthetho we-QSPT (ikhwalithi, insizakalo, intengo, isikhathi) wokuphathwa kwebhizinisi futhi kucebisa kancane kancane, kulungisa futhi kuqedela ukwakheka komkhiqizo kulandela ukufunwa kwasekhaya futhi kuhambelana nenkambiso yentuthuko yezemishini yezimboni eChina ukuze inikeze izinsiza ezisekelayo futhi izinsizakalo ezimbonini eziningi kufaka phakathi ukupakisha, ukuphrinta, i-elekthronikhi, izinto ezisebenza ngogesi, imoto, imishini, insimbi, ukushisela, ukulawulwa kwedijithali, imboni kaphethiloli kanye namakhemikhali kulo lonke elaseChina. Okwamanje, izinkampani eziningi ezidumile eChina zisungule ubudlelwane besikhathi eside futhi obuzinzile nathi.
Njengoba inqubo yemboni ezishintshayo eChina iyaqina, kuphakanyiswa izinselelo ezintsha zemishini yasekhaya kanye nemboni ezisebenzelayo. Okwamanje, kunikeza namathuba entuthuko yethu. Ngonyaka wesigamu sesibili ka-2006, safaka futhi sakha i-YSC China Manufacturing Base futhi saqala ukusetha iqembu lezentuthuko. Emphakathini wanamuhla lapho izindleko zokukhiqiza zithuthukiswa kancane kancane, imikhiqizo eyinhloko ye-YSC igcina ukuncintisana kwentengo ngesizathu sokuthi ikhwalithi iqinisekisiwe. Okwamanje, uchungechunge lwentuthuko nokukhiqiza luyanda. Ngaphandle kwezidingo ezigculisayo zama-oda asekhaya, amanye asetshenziswa eSouth Korea nasemazweni aseningizimu mpumalanga ye-Asia. Ngemuva kweminyaka eminingi yokusebenza kanzima, yathola ukwamukelwa kokumaketha futhi. Ngakho-ke, umkhiqizo we-YSC awukona ukukhetha kwakho okuhle kuphela kepha futhi nezinsizakalo njengesiqinisekiso sempumelelo yakho. Ezinsukwini ezizayo, sizoqhubeka nokubambelela emgomweni wokuqikelela naphezu kwenzuzo yesilinganiso futhi akukho ukusetshenziswa kabi kokuthola izinzuzo. Sizozinikela ngokugcwele ekuthuthukiseni imishini ne-automation e-China.
Sithanda ukujoyina izandla ekwakheni ikusasa elithembisayo lokuzenzekelayo kwezimboni zasekhaya.